Siem Reap wuxuu gacmo furan ku soo dhaweynayaa Dalxiisayaasha Shiinaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Siem Reap wuxuu gacmo furan ku soo dhaweynayaa Dalxiisayaasha Shiinaha
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Cambodia Breaking News • Wararka Shiinaha • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Saraakiisha Dalxiiska Shiinaha waxay dareensan yihiin in adduunku uu ku bahoobay dalxiisayaasha Shiinaha oo safarka ay ku noqotay riyo ay dad badan ku riyoodaan Sarkaalka Shiinaha wuxuu ka hadlayaa quruumaha aan saaxiibtinimada lahayn ee ka jawaab celinta badan.
Koonfurta Kuuriya, calaamadaha ayaa bilaabay inay ka soo baxaan daaqadaha maqaayadaha iyagoo leh, "Shiine lama ogola." Kasiinad ku taal waddanka oo loogu talagalay martida ajnebiga ah ayaa sheegtay in aysan hadda aqbalin kooxaha dalxiisayaasha ka imanaya Shiinaha. In ka badan nus milyan qof ayaa saxiixday codsi, oo loo gudbiyay dowladda, iyagoo ku baaqaya in laga mamnuuco dadka soo booqanaya waddanka u dhow ee gaaraya 1.4 bilyan.
Raiisel wasaaraha Kambodiya Hun Sen ayaa talaadadii sheegay in talaabooyin xadidan oo xadidan oo ay wadaan wadamada qaar si looga hortago cudurka cusub ee loo yaqaan coronavirus ee dilaaca ayaa sababaya takoor iyo argagax, kuwaas oo "ka khatar badan kan cusub coronavirus laftiisa", sida ay qortay wakaalada wararka ee Xinhua
Qaar ka mid ah hudheelada ku yaal (waqooyiga-galbeed ee Kambodiya) Gobolka Siem Reap ma soo dhawayn oo keliya dalxiisayaasha Shiinaha laakiin waxay siisay qiimo dhimis. Dadka reer Kambodiya ayaan takoorin dalxiisayaasha Shiinaha iyo maalgashadayaasha.
Ku dhowaad badan Chinese u booqday ujeeddooyin ganacsi sida loogu farxay sanadkii hore, sida lagu sheegay warbixinta, ama 936,000 iyo 1.08 milyan.
Booqdayaasha Shiinaha waxay xirnaayeen maaskarada qalliinka buluugga ah ee fudud markii ay ku soo wareegeen burburka Angkor Wat, oo inta badan ay ku badan yihiin dalxiisayaal Shiineys ah inta lagu jiro fasaxa Sannadka Cusub ee Lunar laakiin xasilloonida toddobaadkan la soo dhaafay.
Talaadadii, in ka badan 300 oo shirkadood oo Lao ah ayaa ugu deeqay in ka badan $ 500,000 munaasabad ka dhacday Laos si ay u taageeraan dagaalka Shiinaha ee ka dhanka ah cudurka cusub ee coronavirus iyo isla mar ahaantaana ay soo dhaweynayaan booqdayaasha Shiinaha.
Raiisel wasaaraha Malaysia Mahathir Mohamad ayaa sheegay in dowlada Malaysia ay bixin doonto gargaar, markii loo baahdo, qaab cunto iyo waxyaabaha muhiimka u ah caafimaadka gobolka Hubei, xudunta u ah cudurka, iyo meelaha kale ee Shiinaha.
Danmark, safaaradda Shiinaha waxay ugu baaqday wargayska Jyllands-Posten inay raaligelin ka bixiso sawir gacmeed tifaftiran oo muujinaya calanka Shiinaha oo leh astaamo fayras ah halkii ay ka ahaan lahaayeen xiddigo taariikh casaan ah leh.
Kuwa ka soo jeeda Shiinaha, laakiin aan ka soo jeedin Shiinaha, ayaa sidoo kale la kulmay falcelinno adag. In Sri Lanka, koox dalxiisayaal ah oo ka yimid Singapore - halkaas oo dadka ugu badani ay asal ahaan ka soo jeedaan Shiinaha - ayaa laga hor istaagay inay fuulaan soo jiidashada maxalliga ah Ella Rock muuqaalkooda darteed, sida uu sheegayo Tucker Chang, oo 66 jir ah, kana mid ah dalxiisayaasha. Ma jiro qof kooxda ka mid ah oo taariikh ku lahaa safarkii ugu dambeeyay ee Shiinaha.
Dalka Faransiiska, wasaaradda arrimaha dibadda ayaa kula talisay iskuulada iyo jaamacadaha inay dib u dhigaan isdhaafsiga ardayda iyo Shiinaha. Ugu yaraan hal dugsi sare oo ku yaal magaalada Paris ayaa ka laabtay casuumaad loo fidiyay koox arday ah oo lagu wado inay toddobaadkan yimaadaan.
Kanada gudaheeda, waalidiinta ku nool jaaliyadaha waqooyiga Toronto waxay bilaabeen codsi ay ku boorinayaan iskuulada inay ku qasbaan ardayda dhawaan ka soo laabatay Shiinaha inay guryahooda joogaan ugu yaraan 17 maalmood si looga fogaado fursad kasta oo cudurka lagu faafiyo. Codsiga wuxuu uruuriyay ku dhowaad 10,000 saxiixyada aagga, oo ay ku nool yihiin qowmiyado badan oo Shiine iyo Aasiyaan ah.